Hankalaza ny faha-6 taonany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsiahy. Ny taona 2005 no nisy ny vina hanorina fiangonana iray vaovao any Tsarafaritra Imerintsiatosika. Natsangana tamin’izany ary ny mpikambana tao amin’ny birao handinika sy hiandraikitra ny fanorenana io fiangonana io. Mompera Rakotomamonjy Basile, curé tamin’izany fotoana izany no nitarika ny komity. Ny volana aogositra 2006 no niatomboka ny asa ary ny taona 2012 kosa no vita tanteraka. Ny 1 desambra 2012 no notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny EKAR Fo Madion’i Maria Tsarafaritra Imerintsiatosika niaraka tamin’ilay Chapelle misy an’ilay Hazo Fijaliana voajanahary. Ny Arsevekan’Antananarivo Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona moa no nitarika ny Eokaristia nandritra io fotoana io.
Misy Faritra dimy mitsinjara ny Kristianina ao amin’ny EKAR Fo Madion’i Maria dia ny Faritra Atsinanana Voalohany na Notre Dame de Lourdes izay misy APV 6, Faritra Atsinanana Faharoa na Notre Dame de Bon Remède mizara APV 8, Faritra Atsinanana Fahatelo na Notre Dame de l’Assomption misy APV 7, Faritra Tsarahonenana na Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus misy APV 4 ary ny Faritra Avarabohitra na Sainte Immaculée Conception misy APV 7. Ny isan’ny tokantrano kristianina kosa dia eo amin’ny 671 araka ny anton’isa tamin’ny 5 marsa 2017.
Nanapa-kevitra ny diosezin’Antananarivo fa hatao renivohitry ny disitrika ny Ekar Fo Madion’i Maria Tsarafaritra ny 28 oktobra 2018 . Anton’izany fanitarana izany moa ny fitombon’ny isan’ny mpino kristianina eny an-toerana sy ny fivelaran’ny tanàna. Misaraka tanteraka amin’ny EKAR Fo Masin’i Jesoa araka izany ny fitantanana ity Disitrika ity ary efa mizaka pretra sy diakra
Niezaka hatrany ireo biraon’ny filan-kevitra hanatsara tanteraka ny foto-drafitr’asa ka nisy foana ny ezaka fanorenana natao, isan’izany ny fananganana ny Tamboho manodidina ny Fiangonana izay vita ny taona 2017, ny trano hipetrahan’ny Pretra sy ny Katesista ary ary fividianana groupe électrogène. ampiasaina amin’ny alahady rehefa tapaka ny herinaratra
Ilay Hazo Fijaliana voajanahary
Voalaza etsy ambony ny fisian’ny Hazo Fijaliana voajanahary ao amin’ny Chapelle izay mampiavaka ity Disitrika ny Tsarafaritra ity. Manan-tantara tokoa izy io satria mifono zava-miafina ny tantaran’izy io. Fianakaviana iray antsoina hoe « Messéna » mpifindra monina avy any Italia ary nonina tao Provence (Frantsa), mpamboly niasa ireo tany maina sy karakaina ho fiarovana voly no asan’izy ireo no niandohan’izy io. I Vincent, lahimatoan’io fianakaviana io, no nahita ilay fakan-kazo nivoaka ny tany nohasainy. Hazo « Amender » efa nilevina nandritry ny roanjato taona io fakan-kazo io. Nahatalanjona satria naka endrika sy halehibena vatan’olombelona izy io. Misy rantsany lehibe roa sahala amin’ny lakroa no sady naka endrika tànana efa tsy nisy nofo intsony ary ny vatan’ny hazo kosa dia toa nisy faritra iray nivona naka endrika lohan’olona ary toa maka endrik’olona mijaly. Nitady toerana hametrahana io Hazo Fijaliana voajanahary io moa i Vincent nandritra ny taona maro koa noho ny fitahian’Andriamanitra dia tafahoana tamin’ny fikambanana « Sekolin’ny masoandro » ka ao amin’ny Chapelle d’Adoration ao Tsarafaritra Imerintsiatosika no nametrahana azy.
Amin’ity taona ity no hankalaza ny faha-6 taona niorenany ny EKAR Fo Madion’ny Maria Distrika ny Tsarafaritra ao Imerintsiatosika ka amin’ny alahady 2 desambra 2018 ho avy izao. Manomboka amin’ny 6 ora sasany maraina ny fankalazana ny Eokaristia, lamesa tokana ihany. Hisy ny fihaonam-be ny taranaka sy koranam-pianakaviana ny folakandro. Ankoatra ny eo antoerana dia asaina avokoa ireo rehetra efa nandalo tao ka nahazo fahasoavana hira-hiombom-bavaka.